Qarax ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul oo dilay ugu yaraan hal qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldQarax ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul oo dilay ugu yaraan hal qof
March 13, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dad ka badbaaday qaraxa ka dhacay Kabul maanta oo Isniin ah oo lugeynaya meel ku dhow halka qaraxu ka dhacay. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Kabul-(Puntland Mirror) Qarax ka dhacay bartamaha caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maanta oo Isniin ah ayaa burburshay gaari bas ah oo siday shaqaale dowladda katirsan, waxaana ku dhintay ugu yaraan hal qof waxaa kale oo ku dhaawacmay sideed qof, sida uu sheegay Sediq Sediqqi oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi.
Gaariga ayaa waxa uu siday shaqaale katirsan mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ugu weyn Afghanistan.
Sargaal dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in qaraxa uu sababay qof isa-soo biimeeyay oo lugeynayay, balse afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in uu u muuqdo in uu sababay bumbo dhulka lagu aasay.
Ma jirto koox ilaa iyo hadda sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse waxay kusoo beegmaysaa wakhti Taalibaan ay kordhisay weeraradeeda gudaha dalka Afghainstan.
Asbuucii lasoo dhaafay, in ka badan 30 qof ayaa la dilay kadib markii weeraryahano u labisan sida dhakhaatiirta ay weerar ku qaadeen isbitaalka milatari ee ugu weyn gudaha caasimada dalka Afhanistan ee Kabul.